Bebop2ကို SkyController - စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စပိန်ဘာသာဖြင့် | Gadget သတင်း
Miguel Gaton | | မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ, reviews, စက်ရုပ်
ယနေ့ငါတို့သည်သင်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆောင်ခဲ့ရမည် Bebop 2စျေးကွက်အတွင်းအများဆုံးပြောဆိုမှုများဖြစ်စေသော Parrot မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်စမ်းသပ်တတ်နိုင်သမျှပြည့်စုံစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ SkyController နှင့်စမ်းသပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိခဲ့သည်, Bebop2ကိုရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိစေရန်သင်၏တက်ဘလက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဝေးထိန်းတစ်ခု။
ပထမဆုံးသတိပြုရမည့်အချက်မှာ Bebop2သည်ကစားစရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏အကြိုးခံစားခှငျ့အတှကျကြှနျုပျတို့တတျနိုငျသ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးတွင်နေရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်အိမ်ထဲတွင်အသေးငယ်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်မျှသာဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်စျေးကွက်ရှိသူများအကြား။ SkyController ပါသည့် Bebop2၏စျေးနှုန်းမှာယူရို ၆၀၀ ဖြစ်ပြီးကင်မရာကသင့်အားခွင့်ပြုသည် Full HD resolution (1920x1080p) နှင့် 14 megapixel ပုံများဖြင့်ဗီဒီယိုများကိုရိုက်ကူးပါ.
2 Bebop2ကင်မရာ
3 သင်၏တက်ဘလက်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သည့် SkyController
4 Bebop ပျံသန်းခြင်း 2
5 Bebop2မှာ SkyController ရဲ့ထူးခြားချက်များ
6 Bebop2ဗီဒီယို
7 Bebop2ဓာတ်ပုံပြခန်း
10 Bebop2ကိုဝယ်ပါ
ဒါက Bebop2အပြင်ပန်းနဲ့တူတယ်
ယခင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားမောင်းနှင်ခဲ့သူများအတွက်၊ Parrot Bebop2သည်ပျံသန်းရန်အလွန်လွယ်ကူသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ပျံသန်းရာတွင်တည်ငြိမ်မှုသည်ရှင်းလင်းစွာအကျိုးရှိသည် အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ပေါ့ပါးကိရိယာ။ အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ပန်ကာများထက် ကျော်လွန်၍ ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိပါ။ အခြားအရာအားလုံး (၎င်း၏အစွမ်းထက်သောကင်မရာအပါအ ၀ င်) ကိုအဓိကကိုယ်ထည်သို့ထည့်သည်။ ၅ မိနစ်ထက်နည်းသောအချိန်တွင်သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုများကိုထိန်းချုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သူ့ ချွတ်နှင့်ဆင်းသက်အလွန်ချောမွေ့ဖြစ်ကြသည် ဒီမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုမောင်းနှင်နေချိန်မှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှုဟာအတော်လေးနည်းပါတယ်။
Parrot သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Bebop2သည်ပုံမှန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှသည်မျှော်လင့်သမျှကိုပြုလုပ်သည် ထိုသို့perfectlyုံပြုလုပ်ပါဘူးအလွန်တည်ငြိမ်သောပျံသန်းမှု၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအဝေးထိန်းခလုတ် (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သောကိရိယာများတွင်ရှားပါးသည့်အရာ)၊ ပျံသန်းနိုင်စွမ်း၊ လေကိုခုခံနိုင်မှု၊
Bebop2ကင်မရာ
Bebop2နှင့်၎င်း၏ကင်မရာကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်
ငါတို့ပြီးသားငါတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အဆင့်မြင့်သကဲ့သို့ ကင်မရာ Bebop2၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အာရုံခံကိရိယာသည်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးများစွာကိုပေးသည် Full HD (1920x1080p) နှင့် 14 megapixel ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ၁၈၀ ဒီဂရီအထိရွေ့လျားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသည့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အမျိုးအစားအတွက်အလွန်ကောင်းသောဝိသေသလက္ခဏာများသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုရန်အတွက်ယုတ္တိနည်းအရမလုံလောက်ပါ။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ကိုယ်ထည်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းထားသော၎င်း၏ဒီဇိုင်းက၎င်းကိုပိုမိုတည်ငြိမ်မှု၊ လေခွင်းအားနည်းချက်များနှင့်ကူညီရန်ကူညီပေးသည်။ ကျယ်ပြန့်ထောင့်.
Bebop2ကို FreeFlight3အက်ပလီကေးရှင်းမှတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းမှမောင်းနှင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်သည် သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုစုစုပေါင်းစီးဆင်းမှုဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မည့် Skycontroller နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ Skycontroller သည်သင်၏တက်ဘလက်နှင့် Wi-Fi မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးသင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် (၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်) ၎င်းသည်တက်ဘလက်၏ Wi-Fi အချက်ပြမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် signal ၏အကွာအဝေးခန့် 250 မီတာမှ2ကီလိုမီတာဖြစ်ခြင်းကနေသွားသည်နေသမျှကာလပတ်လုံးငါတို့ controller ကိုနှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အကြားမည်သည့်အတားအဆီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဖြစ်။ Skycontroller ဖြင့်သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုသင်ပျံသန်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကြည့်နေစဉ်ပျောက်ကွယ်သွားသည် တက်ဘလက်ဖန်သားပြင်မှလူမြင်ကွင်းမှတဆင့်သင်အေးဆေးစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်.
Bebop ပျံသန်းခြင်း 2
Bebop2ကိုစတင်စမ်းသပ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ Skycontroller နှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုသာဖွင့်ရန်၊ တက်ဘလက်၏ WiFi ကို Skycontroller နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်၊ FreeFlight3လျှောက်လွှာကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ကြောင်းအခိုက်အနေဖြင့် သင့်တက်ဘလက်၏မျက်နှာပြင်သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှဖမ်းယူသောမြင်ကွင်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြလိမ့်မည် လေယာဉ်အရှိန်၊ အမြင့်၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်ထိန်းချုပ်သူအကြားအကွာအဝေး၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း (သို့) ဗွီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောခလုတ်ကိုထိခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသောအလုပ်များဖြစ်ပြီးလက်ျာထိန်းချုပ်မှုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ သင်လိုချင်သမျှကိုဖမ်းယူရန်ကင်မရာကို ၁၈၀ ဒီဂရီအထိရွှေ့နိုင်သည်။
La Bebop2၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်မိနစ် ၂၀ ခန့်ဖြစ်သည် ၎င်း၏တိုးတက်လာသော 2.700 mAh Li-ion ဘက်ထရီကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အဝေးထိန်းသည်တူညီသောဘက်ထရီအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်၊ သူတို့ကိုသင်လဲလှယ်နိုင်တယ် - ယုတ္တိနည်းအရသင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ဘက်ထရီကို ၁၀၀% ဖြုတ်စရာမလိုပါ။ ထို့အပြင်ဝေးလံခေါင်သီသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘက်ထရီလုံးဝနီးပါးမသုံးစွဲသောကြောင့်နောက်ထပ်မိနစ် ၂၀ အကြာတွင်ဒုတိယပျံသန်းမှုကိုခံစားရမည်။
Bebop2မှာ SkyController ရဲ့ထူးခြားချက်များ
SkyController နှင့်အတူ Bebop 2
ရိုတာ «လေး rotors အချင်း ၅ စင်တီမီတာခန့်ရှိပန်ကာတစ်ခုစီအတွက်ဓါးသွား ၃ ခု»
အများဆုံးအလျားလိုက်မြန်နှုန်း 60 km / h
အချက်ပြအကွာအဝေး မီတာ ၂၅၀ (SkyController မပါပဲ)
အချက်ပြအကွာအဝေး ၂ ကီလိုမီတာ (SkyController ဖြင့်)
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မိနစ် ၂၀ ခန့်
ဘက်ထရီ 2.700 mAh လီ - အိုင်းယွန်း
internal memory 8GB Internal Memory ကို microUSB မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ FreeFlight2မှတက်ဘလက်နှင့် Bebop3ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သည်
ကင်မရာ « 14 megapixels ဗွီဒီယိုကို Full HD format ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန် (1920x1080p) »
အပိုကင်မရာအင်္ဂါရပ်များ ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှု တုန်ခါမှုစနစ် ၁၈၀ ဒီဂရီပြောင်းကုန်ပြီ»
ရှုထောင့် 38'2 x ကို 38'2 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် (ဘီဘို ၂) 500 ဂရမ်
ရှေ့ပြေးနည်းလမ်းများ smarpthone သို့မဟုတ်တက်ဘလက် (iOS / Android) နှင့် SkyController ထိန်းချုပ်မှု
Bebop2ဗီဒီယို
ဒီမော်ဒယ်ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိူင်တဲ့အရာအားလုံးကိုမဆုံးရှုံးစေဖို့ဒီနေရာမှာ SkyController remote နဲ့အတူ Bebop2ကိုအပြည့်အဝမြင်နိုင်တဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုပါ။
Bebop2ဓာတ်ပုံပြခန်း
ဤ Parrot ကိရိယာ၏ဓာတ်ပုံပြခန်းတစ်ခုလုံးကိုခံစားကြည့်ပါ။
Bebop2ကိုဝယ်ပါ
အခု Bebop2ကို ၀ ယ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးစရာကဒီ packet ကနေသင်ရလိမ့်မယ် Bebop 2, SkyController2နှင့် FPV မျက်မှန်များသည် Juguetronica စတိုးတွင်ယူရို ၆၉၉ သာရှိသည်။။ ဤသုံးသပ်ချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည့်ဝေးလံခေါင်သီသည်ယခင်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကို ၀ ယ်ရန် ပို၍ အကြံပေးသည် တိုးတက်မှုအချို့ကိုပေးသော SkyController အသစ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » ကျနော်တို့ SkyController နှင့်အတူ Bebop2စမ်းသပ်ပြီး
Allo ယခုကို Google virtual messaging app သစ်ကို virtual အကူအညီနှင့်ထပ်မံရယူပါ